CT1EIZ - नेटवर्क रेडियो
घर / लेखक: CT1EIZ
प्रकाशित अक्टोबर 1, 2018 अक्टोबर 1, 2018
एमेच्योर रेडियो, Zello अपरेशन
हामी यसका बारे पूर्ण भिडियो समीक्षा घोषणा गर्न खुसी छौं Boxchip S700A - एक डीएमआर / एनालग संकर ट्रान्सीभर, एन्ड्रोइड ओएसको साथ र G जी / एलटीई सक्षम। VHF र UHF संस्करणहरूमा उपलब्ध छ।
यो भिडियो समीक्षाले UHF मोडेल प्रस्तुत गर्दछ।
तपाइँलाई यो रेडियो मनपर्नेछ र हामी तपाइँको लागी एक छुट छ। यदि तपाईं प्रोमो कोड प्रयोग गर्नुहुन्छ HRCDMR माथि चेकआउट तपाईंसँग एक थप छुट र नि: शुल्क शिपिंग हुनेछ, तपाईं बस्ने जहाँसुकै फरक पर्दैन।
द्वारा भिडियो HamRadioConcepts
अब आफ्नो Boxchip S700A अर्डर गर्नुहोस्
प्रकाशित सेप्टेम्बर 16, 2018 सेप्टेम्बर 16, 2018
के तपाई नेटवर्क रेडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ?
के तपाईं नेटवर्क नेटवर्क रेडियो खरीद गर्न अघि सर्नु भन्दा अगाडि Zello मा प्रत्यक्ष संचार सुन्न चाहनुहुन्छ?
यहाँ आधिकारिक नेटवर्क रेडियो चैनलहरू छन्:
कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको हो Boxchip S700A पहिले पर्याप्त ब्याट्री क्षमता छ।
१ प्रकारको C-C USB केबल र विन्डोज 1 वा माथिको कम्प्यूटर आवश्यक छ। .Net फ्रेमवर्क संस्करण than.० भन्दा कम हुनुहुन्न।
स्थापना BPS स्थापना प्याकेज तपाईले चाहानु भएको ठाउँमा।
१.२ USB डिबगिंग सक्षम गर्नुहोस्
हामीलाई तपाईंको उपकरणमा USB डिबगिंग सक्षम गर्न आवश्यक छ BPS को कारण USB मार्फत अनुकूलन फाइलहरू पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस्। हामी यसलाई यी चरणहरूको अनुसरण गर्न सक्षम गर्न सक्छौं:
a) उपकरणमा पावर;
b) "सेटिंग्स-> फोनको बारेमा" चयन गर्नुहोस्;
c) "बिल्डर नम्बर" क्लिक गर्नुहोस् times पटक चाँडै र तपाइँले टिप देख्नुहुनेछ;
d) "सेटिंग्स" पछाडि जानुहोस्, "फोनको बारेमा" माथिको "डेवलपर विकल्पहरू" मेनू आईटम छ;
e) "विकासकर्ता विकल्पहरू" चयन गर्नुहोस् र "सक्रिय पार्नुहोस्";
f) "USB डिबगिंग" सम्म तल तान्नुहोस् र यसलाई सक्षम गर्नुहोस्;
g) टाइप-सी USB केबल द्वारा कम्प्युटरको साथ उपकरण जडान गर्नुहोस्। तपाईले फिंगरप्रिन्ट कन्फर्मन पहिलो पटक देख्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोस् र सहमत हुनुहोस्।
१.1.3 पुरानो संस्करण अनुकूलन खाली गर्नुहोस्
डेस्कटपमा "मेरो कम्प्युटर" बाट उपकरण खोल्नुहोस्, यदि त्यहाँ छ भने पुरानो संस्करण अनुकूलन फाइलहरू काट्नुहोस् - पुरानो संस्करण अनुकूलन फाइलहरू पथमा हुनुपर्दछ "S700A \_ आन्तरिक भण्डारण ONT CONTACTLIST.xls" र "S700A \_ आन्तरिक भण्डारण \_ PTT_CHANNEL_LIST_DATA.xls" , तपाई यी २ फाईलहरू कम्प्युटर डिस्कमा भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ।
१.1.4 नयाँ संस्करण APK स्थापना गर्नुहोस्
"DMR_V014_sign.apk" लाई "S700A \_ आन्तरिक भण्डारण \_" मा प्रतिलिपि गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी उपकरण प्रोग्राम गर्न सक्दछौं।
२.१ एउटा उपकरण चयन गर्नुहोस्
सामान्यतया, BPS ले पत्ता लगाउनेछ र स्वत: उपकरण चयन गर्दछ जब तपाईं तलको स्क्रिनशटको रूपमा खोल्नुहुन्छ। तर कृपया नोट गर्नुहोस् BPS ले अब बहु-उपकरणहरू समर्थन गर्दैन।
BPS का लागि समाधानले एक उपकरण पत्ता लगाउँदैन, तपाईंलाई सायद प्रत्येक चरणको प्रयासको आवश्यक पर्दैन:
a) निश्चित गर्नुहोस् कि "USB डिबगिंग" सक्षम छ;
b) प्लग-पुल USB केबल धेरै समय;
c) तपाईंको उपकरण पुनः सुरु गर्नुहोस्;
d) तपाइँको कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्;
e) तपाइँको कम्प्युटरमा "adbdriver.zip" स्थापना गर्नुहोस्;
f) अन्तमा "adb_usb.ini" प्रतिलिपि गर्नुहोस् "C: \_ प्रयोगकर्ताहरू \_ तपाईंको नाम and। android \_"।
२.२ अनुकूलन पढ्नुहोस्
यन्त्रबाट अनुकूलन पढ्न हरियो बटन क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले देख्नुहुनेछ "मोडेल नम्बर" र "सिरियल नम्बर" तल जस्तै भरिएको छ।
पहिलो पटक तपाईले पढ्ने त्रुटि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनकि त्यहाँ उपकरणमा कुनै नयाँ अनुकूलन छैन, यसलाई लेख्नुहोस्
पढ्नु ठीक छ।
२.2.3 अनुकूलन लेख्नुहोस्
सबै प्यारामिटरहरू अनुकूलन गर्नुहोस्, त्यसपछि रातो बटन क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको उपकरणमा अनुकूलन लेख्न।
प्रकाशित सेप्टेम्बर 7, 2018 सेप्टेम्बर 7, 2018
तपाईंसँग धेरै रेडियोहरू छन्। नगदी संग राम्रो भुक्तान! वा मात्र नि: शुल्क रेडियो जित्ने मौका!
प्रकाशित सेप्टेम्बर 5, 2018 सेप्टेम्बर 5, 2018
यस द्रुत गाईडले बक्सचिप S700A मा कसरी डीएमआर फ्रिक्वेन्सीहरू प्रोग्राम गर्ने बारेमा वर्णन गर्दछ
पहिले, कृपया पढ्नुहोस्S700A DMR उपयोगकर्ता पुस्तिका"कसरी डीएमआर फ्रिक्वेन्सी सेट गर्ने भनेर जान्नको लागि।
त्यसो भए, सही जानकारी इनपुट गर्नुहोस् PTT च्यानल सूची र सम्पर्क सूची एक्सेल पाना प्रयोगकर्ता पुस्तिका अनुसार,
अन्तमा, यी २ पानाहरू तपाईंको रेडियोमा आयात गर्नुहोस्।
यो महान रेडियो को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्
प्रकाशित अगस्ट 30, 2018
IRN २-मार्ग रेडियो संचारको लागि एक उत्साहजनक मोड हो। कुनै पनि समयमा, तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ कि कुन Qigns एक राम्रो QSO को लागि अनलाइन छन्। यहाँ सूची जाँच गर्नुहोस्.
प्रकाशित अगस्ट 29, 2018 अगस्ट 29, 2018
यहाँ एक छ राम्रो परिमार्जन पुरानो एकाइहरूमा Inrico TM-8 अडियो सुधार गर्दछ। लेख M0FXB द्वारा लेखिएको थियो।
प्रकाशित अगस्ट 29, 2018
by क्रिस G7DDN
अह! मैले सोचें कि शीर्षकले तपाईंको ध्यान खिच्न सक्छ!
भविष्यमा फर्कनुहोस् - २०० style शैली
आफ्नो दिमाग फिर्ता कास्ट गर्नुहोस्, यदि तपाईं गर्नुहुन्छ भने २०० 2007 मा पहिलो आईफोनको प्रक्षेपणमा। तपाईं अझै पनि यूट्यूबमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रस्तुतीको मास्टर जो स्टीभ जॉब्सले शुरूमा आफ्ना श्रोताहरूलाई धोका दिन प्रयास गरेर वास्तवमै यो क्रान्तिकारी उपकरणको परिचय दिएका थिए।
उनले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन कोशिस गरे कि एप्पलले वास्तवमा तीन सुरु गरीरहेको छ अलग उपकरणहरू।
उनले उनीहरूलाई बारम्बार दोहोर्याइरह्यो - "एक आईपड, एक फोन, इन्टरनेट संचार उपकरण - एक आईपड, एक फोन, एक इन्टरनेट संचार उपकरण"।
अन्तमा दर्शकहरु उनी वास्तवमा उनीहरुसँग खेलिरहेका थिए भन्ने तथ्यलाई औंल्याउँछन् एउटा उपकरण लागि सबै यी प्रयोगहरू।
टेक्नोलोजी गिक्सले यसलाई "कन्भर्जेन्सन" भन्छ र आईफोन सबै कन्भर्ड भएका उपकरणहरूका लागि आईकन हो।
कुराकानी यहाँ रहनको लागि हो!
र यहाँ हामी ११ बर्ष भइसकेका छौं र अभिसरण राम्रोसँग र वास्तवमै यहाँ छ!
कुनै टिभी आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरण
एउटा खेल खेल्दै हुनुहुन्छ?
कुनै गेमि device उपकरण आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरण
तपाईंको व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ?
कुनै पीसी आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरण
कुनै रेडियो आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरण
तपाईका साथीहरूसँग सञ्चार गर्दै हुनुहुन्छ?
कुनै टेक्स्टि needed आवश्यक छैन - यसको लागि मोबाइल उपकरणमा सोशल मीडिया
कुनै पीसी आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरणमा स्ट्रिम गर्दै।
गुणस्तरीय फोटो लिदै हुनुहुन्छ?
कुनै क्यामेरा आवश्यक छैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरण
टिभीमा यसको लागि कुर्नु पर्दैन - त्यसका लागि मोबाइल उपकरणमा एक अनुप्रयोग छ
मोबाइल उपकरणमा बिभिन्न स्रोतहरूबाट तपाईको औंलाहरूमा।
तपाईंको टोलीबाट भर्खरको गोलहरूको लागि तत्काल सतर्कताहरू?
स्कोर भएको केही सेकेन्डमा तपाईंको मोबाइल उपकरणमा फ्ल्याशहरू
म जान सक्दछु र तपाईंलाई सबै माथि थाहा हुन्छ तपाईंको आफ्नै अनुभवमा सत्य हुन।
र रेडियो यसबाट छुट छ? नहुन सक्छ!
के कसैले कसैलाई साँच्चिकै विश्वास छ कि रेडियो शौकहरूले प्रयोग गरेको प्रकारको पीटीटी संचारहरू रहिरहन्छन् बाहिर परिवर्तित संसारको?
टीमस्पिकमा जेलो र आईआरएन जस्ता अनुप्रयोगहरूको उदय धेरै वर्षदेखि विश्वको बाँकी संसारमा के हुँदैछ भन्नेको पूर्ण प्राकृतिक विकास हो। रेडियो शौकहरूले यसको बिरूद्ध लड्न सक्छन्, तर यो वास्तवमा पहिले नै भइसकेको छ ...
नेटवर्क रेडियोको उदय
नेटवर्क रेडियो घटना को उदय वर्तमान मा रोक्न लाग्न सक्छ।
"नेटवर्क रेडियो" (G1YPQ को स्वामित्वमा रहेको) भनिने जेलोमा रहेको च्यानलहरूको सूटसँग 4000००० भन्दा बढी सदस्यहरू छन्, २००० भन्दा बढी विश्वसनीय प्रयोगकर्ताहरू छन् र विरलै शान्त छन्।
यो लगभग सबै दिन रेडियो उत्साहीहरू, हम्स र बिना लाइसेन्स प्रयोगकर्ताहरूसँग, अ -्ग्रेजी-बोल्ने संसारको वरिपरि गुज्रिरहेको छ, सबै कुरा गर्ने तरीका जुन टोप ब्यान्ड र २ मिटरको पुरानो दिनको सम्झना दिलाउने तरिकामा।
यो एक राम्रो मोडरेट वातावरण पनि हो, त्यसैले सुरक्षित छ र एक राम्रो ठाउँ जहाँ तपाइँको पहिलो कदम नयाँ शौकमा लिन्छ।
वा हुनसक्छ जहाँ तपाईं "फ्याट चर्वा" गर्न सक्नुहुनेछ अन्य रेडियो दिमागका उत्साहीहरूसँग, एक ठाउँ जहाँ तपाईको प्रगति सीख्ने सीडब्ल्यू वा समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले नयाँ एन्टेना बनाउँदै हुनुहुन्छ, वा हुनसक्छ एन्ड्रोइड ओएस र केहि वरिपरि तपाईंको मार्ग पत्ता लगाउनुहुन्छ। Zello सफ्टवेयरमा लुकेका रत्नहरूको।
यदि तपाईंले अहिलेसम्म प्रयास गर्नुभएन भने, तपाईं केको निम्ति पर्खिरहनु भएको छ?
यदि स्टीव जॉब्स पृथ्वीमै रहेको भए पनि म पक्का छु कि ऊ आफ्नो "परिवर्तित संसार" बाट धेरै गर्व भएको थियो - र जसलाई थाहा छ, ऊ बाँकी हामीसँग नेटवर्क रेडियोमा "हावामा" भएको हुन सक्छ।
© क्रिस रोलिन्सन G7DDN
27 अगस्ट 2018
प्रकाशित अगस्ट 19, 2018
यो S700A एक हाइब्रिड एन्ड्रोइड रेडियो हो जसले १००% कभरेज अनुमति दिन्छ: / जी / G जी / एलटीई / वाइफाइ / वीएचएफ वा यूएचएफ एफएम एनालग र डीएमआर टियर II मार्फत। तपाईं सँधै जडान हुनुहुनेछ।